Sidina iraisampirenena India: mampihantona ny fampiatoana maharitra
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » Sidina iraisampirenena India: mampihantona ny fampiatoana maharitra
Aviation • Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana India • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Aogositra 31, 2021
Sidina iraisam-pirenena India
Ny filohan'ny Fikambanan'ny mpikarakara ny fizahan-tany (IATO), Andriamatoa Rajiv Mehra, dia naneho ny fahatafintohinany mafy tamin'ny fanapahan-kevitra noraisin'ny Minisiteran'ny fiaramanidina sivily / DGCA India hanitatra ny fampiatoana ny sidina iraisam-pirenena hatramin'ny 30 septambra 2021, sy ny visa e-mpizahatany.
Niangavy ny filohan'ny IATO fa tonga ny fotoana tokony hidiran'ny governemanta ary hanampy ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany.
Andriamatoa Mehra dia efa nanery ny fanokafana ny visa e-Tourist efa elaela izao.
Ankoatr'izay, ny fikambanany dia ao ambadiky ny famerenana ny sidina iraisam-pirenena ary nanoritra ny fomba hanatanterahana izany.
Nilaza izy fa tena ketraka sy kivy ireo mpikambana ao amin'ny IATO noho ity fanapahan-kevitra noraisin'ny governemanta ity. Nanambara Andriamatoa Mehra: "Fotoana izao hanampian'ny governemanta ny sehatry ny fizahantany amin'ny alàlan'ny famelomana indray ny fizahan-tany miditra any India", izay mamaritra ireto fangatahana manaraka ireto izay napetraka tamin'ny governemanta.
Andriamatoa Rajiv Mehra, Filoha, IATO
- Hanokatra ny e-turista Visa ho an'ireo mpizahatany vahiny rehetra izay vita vaksiny ary maniry ny ho tonga any India. Avelao ny mpizahatany vahiny hanapa-kevitra raha te-ho any India izy ireo na tsia. Tsy tokony hofeperanay izy ireo handeha any India, rehefa misy firenena hafa manokatra varavarana ho an'ny mpizahatany.
- Toy izany koa, ny hetsika sidina iraisampirenena mahazatra dia tokony haverina, ary avelao ny kaompaniam-pitaterana hanapa-kevitra raha te-hiasa izy ireo na tsia raha misy ny faneriterena ny entana. Saingy tokony avelan'ny governemanta hamerina ny sidina.
Ny sehatra hafa rehetra dia namelombelona ny orinasany tamin'ny alàlan'ny fanohanan'ny Governemanta India, ary ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany ihany no niady mafy mba ho tafavoaka velona tao anatin'izay 18 volana izay tsy nisy fanamaivanana velively. Niangavy ny filohan'ny IATO fa tokony hanohana ny indostrian'ny fizahantany ny governemanta indrindra ireo mpandraharaha mpizahatany miditra izay manana orinasa aotra hatramin'ny martsa 2020.
Andro vitsy lasa izay, Andriamatoa Mehra, dia nandray anjara tamin'ny fivoriana nantsoin'ny minisitry ny Varotra sy ny indostria, Shri Piyush Goyal, hahazoana ny hevitry ny mpanondrana momba ny fepetra takiana tokony horaisina amin'ny antson'ny praiminisitra hampitombo ny fanondranana.
Tamin'io fihaonana io dia nanolotra soso-kevitra mitovy amin'ny famelana ny visa e-fizahan-tany ary hanohy ny hetsika sidina iraisampirenena Andriamatoa Mehra. Nanazava tamin'ny Minisitra ihany koa izy momba ny toe-karena tsy mampidi-doza izay nanjo ireo mpandraharaha mpizahatany nandritra ny areti-mandringana sy ny fomba famoahana ny SEIS efa ela (ny fanondranana entana avy any India Scheme) ho an'ny taom-piasana 2019-20 dia tena ilaina amin'ny fiveloman'izy ireo.
Fanavaozana Vaovao: Torolàlana mijery trozona any Kanada Voasazy $10,000
Empire State Building hanasongadinana ireo mpivarotra pop-up ...
Ny dia amin'ny asa aman-draharaha dia hita fa mampientanentana antsika aorian'ny COVID US
Maninona ny sekretera jeneralin'ny UNWTO Zurab Polokashvili no ...
Poloney dia miomana ny hipoaka amin'ny sehatry ny fizahan-tany
Antso mahery vaika ho an'ny faharetana amin'ny ambaratonga rehetra ao amin'ny Pnud...
Maty tamin'ny horohorontany tany Haiti tamin'ny 1400 mahery